အဆန်းသစ်ဆံုးကင်မရာဖုန်းတစ်ချို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်း – DigitalTimes.com.mm
107 Shares 71 Views
Mobile World Congress 2018 မှာ အဆန်းသစ်ဆုံးဆိုတာတွေကိုပြသသွားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေရဲ့ကင်မရာတွေမှာဆန်းသစ်မှုတွေရှိနေဆဲပါပဲ။ Samsung Galaxy S9 ကိုလည်း နည်းနည်းပဲမြှင့်ထားတယ်လို့ပြောကြပေမယ့် သူ့ရဲ့ variable aperture ဆိုတာက ကင်မရာရဲ့ sensor တွေဆီအလင်းပိုဝင်ပြီး low-light မှာကောင်းကောင်းကြီးရိုက်နိုင်မယ့် feature တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရင်ကဘယ်ဖုန်းမှာမှမမြင်ခဲ့ရဖူးသေးပါဘူး။ Sony Xperia XZ2 ဆိုလည်း ဗီဒီယိုအသားပေးတဲ့ feature အလန်းစားတွေပါလာပြီး 4K HDR ဗီဒီယိုတွေရိုက်နိုင်တာအပြင် 1080p slow-motion ဗီဒီယိုတွေကို 960 FPS နဲ့ရိုက်နိုင်တာက တော်တော်လန်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဒီနှစ်ရဲ့ Mobile World Congress မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ကင်မရာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်တွေဆိုတာ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ အားလုံးမျှော်လင့်မိကြတာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖုန်းတစ်လုံးကိုဈေးကောင်းပေးပြီးမှ ကင်မရာကမလန်းဘူးဆိုရင် ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ? ဒီနေရာမှာ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Samsung နဲ့ Sony တို့ဆိုတာက နောက်ဆုံးအဆန်းသစ်ဆုံး ကင်မရာ feature တွေကို သုံးထားတာဖြစ်ပြီး သူ့အရင်ကအဆန်းသစ်ဆုံးကင်မရာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။
အရင်တုန်းကလည်း ကင်မရာပိုင်းမှာ ပုံမှန်သူများနဲ့မတူဘဲ ထူးကဲခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အောက်မှာတော့ အဲဒီဖုန်းတွေရဲ့ပုံကို ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်အတိုင်းအစဉ်လိုက်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အရင်ခေတ်က ဖုန်းဆိုတာ ဖုန်းထက်မပိုဘဲ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့အချိန် ကင်မရာဆိုတာဘာမှန်းမသိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဒီဖုန်းတွေက သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ဆန်းသစ်နေခဲ့ပါတယ်။
Mobile World Congress 2018 မှာ အဆနျးသဈဆုံးဆိုတာတှကေိုပွသသှားပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့မိုဘိုငျးလျဖုနျးတှရေဲ့ကငျမရာတှမှောဆနျးသဈမှုတှရှေိနဆေဲပါပဲ။ Samsung Galaxy S9 ကိုလညျး နညျးနညျးပဲမွှငျ့ထားတယျလို့ပွောကွပမေယျ့ သူ့ရဲ့ variable aperture ဆိုတာက ကငျမရာရဲ့ sensor တှဆေီအလငျးပိုဝငျပွီး low-light မှာကောငျးကောငျးကွီးရိုကျနိုငျမယျ့ feature တဈခုဖွဈပွီး အရငျကဘယျဖုနျးမှာမှမမွငျခဲ့ရဖူးသေးပါဘူး။ Sony Xperia XZ2 ဆိုလညျး ဗီဒီယိုအသားပေးတဲ့ feature အလနျးစားတှပေါလာပွီး 4K HDR ဗီဒီယိုတှရေိုကျနိုငျတာအပွငျ 1080p slow-motion ဗီဒီယိုတှကေို 960 FPS နဲ့ရိုကျနိုငျတာက တျောတျောလနျးတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ဒီနှဈရဲ့ Mobile World Congress မှာတှမွေ့ငျခဲ့ရတဲ့ ကငျမရာနဲ့ပတျသတျတဲ့ဆနျးသဈတီထှငျမှုအနညျးငယျပဲရှိပါသေးတယျ။ ဒီကငျမရာစှမျးဆောငျရညျတှဆေိုတာ ဖုနျးတဈလုံးရဲ့အရေးကွီးဆုံးအစိတျအပိုငျးတဈခုအနနေဲ့ အားလုံးမြှျောလငျ့မိကွတာပါ။ ကိုယျတိုငျလညျး ဖုနျးတဈလုံးကိုဈေးကောငျးပေးပွီးမှ ကငျမရာကမလနျးဘူးဆိုရငျ ဘယျကွိုကျပါ့မလဲ? ဒီနရောမှာ ခုနကပွောခဲ့တဲ့ Samsung နဲ့ Sony တို့ဆိုတာက နောကျဆုံးအဆနျးသဈဆုံး ကငျမရာ feature တှကေို သုံးထားတာဖွဈပွီး သူ့အရငျကအဆနျးသဈဆုံးကငျမရာဆိုတဲ့လမျးကွောငျးပျေါလြှောကျလှမျးခဲ့တဲ့ ဖုနျးတှရေဲ့သမိုငျးကွောငျးကိုကွညျ့ရအောငျပါ။
အရငျတုနျးကလညျး ကငျမရာပိုငျးမှာ ပုံမှနျသူမြားနဲ့မတူဘဲ ထူးကဲခဲ့တဲ့ဖုနျးတှရှေိခဲ့ဖူးပါတယျ။ အောကျမှာတော့ အဲဒီဖုနျးတှရေဲ့ပုံကို ထှကျခဲ့တဲ့အခြိနျအတိုငျးအစဉျလိုကျဖျောပွပေးထားပါတယျ။ အရငျခတျေက ဖုနျးဆိုတာ ဖုနျးထကျမပိုဘဲ ဆကျသှယျရေးပစ်စညျးတဈခုအနနေဲ့ရှိနခေဲ့တဲ့အခြိနျ ကငျမရာဆိုတာဘာမှနျးမသိခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ဒီဖုနျးတှကေ သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ဆနျးသဈနခေဲ့ပါတယျ။
ကင်မရာ ၄လုံး ဘက်ထရီများများ 18:9 ratio နဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Huawei Y9 (2018)